Guddiga Madaxbanaan ee La dagaalanka Musuq Maasuqa oo Gudoomiye iska doortay
Guddiga madaxa banaan ee ladagaallanka Musuq maasuqa ee dhawaan lagu dhaariyay madaxtooyada dalka ayaa maanta magaalada Muqdisho ku doortay guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee la dagaalanka musuq maasuqa, iyadoo doorashadii dhacday ay ku guuleysteen Maxamed Xuseen Xaamud oo loo dortay guddoomiyaha guddiga halka ku xigeenka loo doortay Dr Xasan Khaliif Xasan.
Munaasabadda lagu dooranayay guddoonka waxaana goob joog ka ahaa Xildhibaanno ka tirsan Aqalka sare iyo Golaha shacabka Safiirka Soomaaliya ee Djibouti iyo mudanayaal kale.
Xildhibaannadi ka qeybgalay doorashada ayaa boggaadiyay sida xorta ah ee guddiga uu u doortay madaxda hoggaamin laheyd shanta sano ee soosocota.
Guddoomiyaha cusub ee maanta la doortay Abuukaate Maxamed Xuseen Xaamud iyo ku xigeenkiisa ayaa u mahadceliyay xubnihii siiyay codka kalsoonida, iyagoo sheegay in guddigaan uu baa bi’in doono musuq maasuqa hareeyay dalkeenna, shaqadooduna ay si deg deg ah ku billaabayaan.
« Ra’isul Wasaare Rooble oo Magacaabay Wasiir Cusub.
Deg Deg Qarax xoogan oo ka dhacay Muqdisho »